Andry Rajoelina : Tokony naka ny hevitry Mugabe! -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Tokony naka ny hevitry Mugabe!
Nisy antony manokana ve nakan’i Andry Rajoelina ho mpanolontsaina manokana an’i Jean-François Mancel? Lasa resabe tokoa ny fijoroan’ity depiote teo aloha ity sy ny fandraisany fitenenana nandritra ilay “diniky ny mpanjanaka” farany teo tany Frantsa iny. Mazava ho azy fa nifaly sy nibitaka avokoa ireo « homo » teto amin’ny tanàna raha vao nahita ny tavan’ity solombavambahoaka ity tamin’ny fahitalavitra.
Na izany aza tokony mba nanontany sy naka ny hevitry ny filoha teo aloha, Robert Mugabe, ihany ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina, mialohan’ny nakany ny depiote Jean-François Mancel ho mpanolontsaina manokany. Samy tamin’ny alalan’ny fanongam-panjakana ihany no niakaran’izy mianaka ireto teo amin’ny fitondrana, saingy misy zavatra goavana maha samy hafa azy ireo koa anefa. Manana ny fomba fijeriny manokana mikasika io « homosexualité » ion y filoha teo aloha, Robert Mugabe ary izay indrindra no tokony nakan’i Andry Rajoelina ny heviny. Efa mba nifankahalala ihany mantsy izy mianaka nandritra ireny Tetezamita ireny.
Be loatra mantsy ny resaka nandeha teto nanomboka tamin’iny fitondrana Tetezamita iny, vao mainka nampitombo ny adihevitra sy ahiahin’ny maro ny fanendrena ity depiote teo aloha mpiaro ny « homo » any Frantsa ity ho isan’ireo mpanolontsaina manokan’ny filohan’ny HAT. Izao tokoa ve no tonga amin’ilay fomba fitenenana Malagasy manao hoe : « ny Hitsikitsika tsy mandihindihy foana fa ao raha! »? Ny zavatra azo antoka mantsy dia ny hoe « tsy hanampinampy foana na koa hanohana fotsiny amin’izao ny olona tahaka ireny Jean-François Mancel ireny fa tsy maintsy misy tanjona ao ambadika ao ». Io resaka « homosexualité » io anefa no tena mampiasa loha mafy ity solombavambahoaka teo aloha ity ary izay indrindra no ilazana hoe « tokony mba naka ny hevitry Robert Mugabe » ihany i Andry Rajoelina!